महिलाले आफ्नै श्रीमानसँग पनि लुकाउँदछन् यस्ता ७ कुराहरु – Enepali Samchar
February 27, 2021 adminLeaveaComment on महिलाले आफ्नै श्रीमानसँग पनि लुकाउँदछन् यस्ता ७ कुराहरु
e nepaalisamchaar पुरुष र महिला भिन्न भएर पनि एकअर्काका परिपूरक हुन् । एकको अस्तित्वबिना अर्को सम्भव छँदै छैन । त्यसकारण महिलालाई पुरुष एवं पुरुषलाई महिलाको आवश्यकता पर्छ । अधिकाँश पुरुषलाई महिलाको बारेमा त्यति नै थाहा हुन्छ जति उनीहरुले देख्छन् र सुन्छन् । खासमा धेरै पुरुषलाई महिलाका रहस्यबारे जानकारी नै हुँदैन । त्यसैले होला एक साहित्यकारले महिलालाई ‘फरेन ल्याण्ड’ अर्थत विदेशी भूमिको सज्ञा दिएका छन् ।
खुसीको खबर प्रविन बास्तोलाका परिवार भन्छन्– न्या’य पाउने आशा पलायो
नेकपा कसको ? कट्टेलको दाबीमाथि कस्तो आउला सर्वोच्चको फैसला ? यस्तो छ सम्भाबना
मध्येरातमा स”म्वेदनशील अं”ग देखाउदै लाइभमा तिर्सना (हेर्नुस भिडियो)